Hip Resurfacing (ပေါင်ရိုးထိပ် အစားထိုးပြုပြင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Hip Resurfacing (ပေါင်ရိုးထိပ် အစားထိုးပြုပြင်ခြင်း)
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။ 12/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ရောဂါအဖြေရှာခြင်း နှင့် ကုသခြင်း
ပေါင်ရိုးထိပ် အစားထိုးပြုပြင်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ
ပေါင်ရိုးထိပ် အစားထိုးပြုပြင်ခြင်းဆိုတာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ရောင်ရမ်းနေတဲ့ ပေါင်ရိုးထိပ်ပိုင်းကို အစားထိုး လဲလှယ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဆစ်ရောင်ခြင်းဟာ အဆစ်ပေါင်းများစွာကို ထိခိုင်ပျက်စီးစေတဲ့ ရောဂါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံး ပြသနာကတော့ အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆစ်ဟာ တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီးလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အဆစ်ကို ဖုံးအုပ်ပေးထားတဲ့ အရိုးနုတွေကိုပါ ပျက်စီးလာစေပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ နာကျင်ခြင်း တောင့်တင်းခြင်း ဝေဒနာတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ပေါင်ရိုးထိပ် အစားထိုးပြုပြင်ခြင်းဘာကြောင့် ပြုလုပ်သလဲ
ပေါင်ရိုးထိပ်အဆစ်ပိုင်းရဲ့ ရောင်ရမ်းမှုဆိုးရွားလာတဲ့အခါ အရိုးအဆစ်တခုလုံးကို အစားထိုးခြင်း၊ ပေါင်ရိုးထိပ်ပိုင်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းတွေ ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ၂မျိုးစလုံးဟာ အစားထိုးနည်းလမ်းတွေဖြစ်ပြီး သိသာတဲ့ ကွဲပြားခြင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ လူနာတွေဆိုရင်၊ မကြာခဏခွဲစိတ်နေရမယ်ဆိုရင် ပေါင်ရိုးထိပ်ပိုင်းပြန်လည် ပြုပြင်တာဟာ အဆစ်တခုလုံး အစားထိုးလိုက်ခြင်းထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းမှာ အရိုးမျက်နှာပြင်ကို အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ ဖြတ်ထုတ်တာမို့ ခွဲစိတ်ပြီးချိန်မှာ လှုပ်ရှားမှု ကြီးကြီးမားမားတွေ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်စေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ပေါင်ရိုးထိပ် အစားထိုးပြုပြင်တဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်တွေက ဘာတွေလဲ
တခြားခွဲစိတ်နည်းတွေလိုပဲ ဖြစ်နိုင်ခြေ အန္တရာယ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကတော့
ပေါင်ရိုးလည်ဆစ်ပိုင်းကျိုးခြင်း။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ ကုသမှုခံယူတဲ့ လူနာအနည်းငယ်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီပြသနာဖြစ်ရင် အဆစ်တခုလုံး အစားထိုးခွဲစိတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အစားထိုးသည့်နေရာမှ သတ္တုဓါတ်မှုန်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
ပေါင်ရိုးထိပ် ပြုပြင်ခွဲစိတ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲခြင်း
ပေါင်ရိုးအစားထိုးခြင်းမှ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာခြင်း
အမျိုးသမီးများ ပေါင်ခြံတဝိုက် ရောင်ရမ်းခြင်း
သွေးခဲခြင်း၊ သွေးယိုခြင်း စတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုမခံယူခင်မှာ ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်တွေနဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။ သိလိုတာတွေရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
ပေါင်ရိုးထိပ် အစားထိုးပြုပြင်ခြင်း မပြုလုပ်မီ ဘာတွေပြင်ထားရမလဲ
သင့်အနေနဲ့ မကြာသေးမီက ဘာဆေးတွေ သောက်နေသလဲ၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်း ဘာရှိလဲ၊ လက်ရှိ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ စတဲ့ကိစ္စတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးရပါမယ်။ မခွဲစိတ်ခင်မှာ မေ့ဆေးဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။ မခွဲစိတ်ခင် ဘယ်ချိန်မှာ စားသောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သင့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကို အလိုက်သင့် ရွှေ့ပြောင်းထားဖို့ လိုပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးချိန်မှာ လေ့ကျင်မှုတွေ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမတိုင်ခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ပေါင်ရိုးထိပ် အစားထိုးပြုပြင်ခြင်း လုပ်ဆောင်နေစဉ် ဘာဖြစ်နိုင်လဲ
ခွဲစိတ်မှုဟာ တနာရီကနေမိနစ် ၉၀ထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဟာ ပေါင်ရဲ့ဘေးတနေရာကို ခွစြိတ်ပြီး ဒဏ်ဖြစ်နေတဲ့ အဆစ်မျက်နှာပြင်ပိုင်းကို ဖယ်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် သတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အဆစ်ပိုင်းကို ထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။
အစားထိုးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို အရိုးနဲ့ တွဲဆက်ဖို့ အခရိုင်လစ်ကော် ဒါမှမဟုတ် အထူးကော် အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။
သိလိုတဲ့အချက်တွေရှိရင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိရင် ပိုသိရအောင် သင့်ရဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဆေးရုံမှာ ၃ရက်ကနေ ၇ရက်ထိ နေပြီးတဲ့အခါ အိမ်ပြန်နိုင်ပါတယ်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်လောက် ချိုင်းထောက်ဖြစ်ဖြစ် အထောက်အကူကိရိယာတခုဖြစ်ဖြစ်သုံးပြီး လမ်းလျှောက်သင့်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ခြင်းဟာ ပုံမှန်လှုပ်၇ှား သွားလာနိုင်တဲ့ အနေအထားကို မြန်မြန် ရောက်နိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဒီနည်းနဲ့ ကုသမှုခံယူတဲ့ လူအများစုဟာ လုံးဝသက်သာသွားကြပါတယ်။ နာကျင်မှုတွေ သိသိသာသာ သက်သာသွားပြီး ပိုပြိး လမ်းလျှောက်လို့ ကောင်းလာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဖန်တီးထားတဲ့ ပေါင်ဆစ်ဟာ နဂိုအဆစ်လိုတော့ ခံစားမှုကို မရနိုင်စေပါဘူး။ ဆရာဝန်ချိန်းဆိုတိုင်းမှာ ပုံမှန်
ပြန်လည်ပြသခြင်းကို ရေရှည်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ လိုပါတယ်။
Hip Resurfacing. http://emedicine.medscape.com/article/1358168-overview. Accessed July 16, 2016.
Hip Resurfacing. http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00586. Accessed July 16, 2016.
Hip resurfacing. http://www.bupa.co.uk/health-information/directory/h/hip-resurfacing. Accessed July 16, 2016.